चर्चामा अरिङ्गालवाली: भन्छिन्, ‘यो सब फेसबुकको कमाल हो’ — Paschimnews.com News From Nepal
चर्चामा अरिङ्गालवाली: भन्छिन्, ‘यो सब फेसबुकको कमाल हो’
पश्चिमन्यूज संवाददाता प्रकाशित : २०७५/६/१६ गते
अरिङ्गाल व्यवसाय गर्दै आएकी बेनी नगरपालिका–७ वीरेन्द्र चोककी सिर्जना भट्टचनले पछिल्लो समय ‘अरिङ्गालवाली’ को पहिचान बनाएकी छन्।
लामो समयदेखि होटल व्यवसायमा आबद्ध उहाँ पछिल्लो समय अरिङ्गालवाली भनेर चिनिनुको कारण हो, अरिङ्गालको व्यापार। बेनीको वीरेन्द्रचोकस्थित होटल रोजिनाकी सञ्चालिका सिर्जनाको अरिङ्गालको व्यापार फष्टाउँदै गएकाले ग्राहकले उनलाई ‘अरिगाङ्लवाली’ भन्न थालेका हुन्। कतिले त अरिङ्गाल खाएर सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्दै आएका छन्।
दुई वर्ष अघि गलेश्वरको चमेरेमा अरिङ्गालको व्यापार गरेको देखेपछि सिर्जनाले पछिल्लो तीन महिनादेखि आफैँले अरिङ्गालको व्यापार गर्दै आएकी हुन्। उनलाई यो व्यवसायमा सल्लाह दिने महिला उद्यमी पुष्पा पुन हुन्।
म्याग्दी विमका रिमबहादुर र खिमबहादुर गौतम भाइले पोलेर ल्याउने अरिङ्गाल सिर्जनाले मानाको रु एक हजार ५०० मा खरिद गर्छिन्। शुरुमा त दुई हजार रुपैयाँसम्म तिरेर अरिङ्गाल खरीद गरिएकामा अनुकूल याममा भने एक हजार ५०० सय रुपैयाँ मानामा पाउने गरेको उनी बताउँछिन्।
सिर्जनाको होटलमा अरिङ्गाल प्रतिप्लेट ५०० रुपैयाँ पर्छ। अहिले यसैको व्यापारमा भ्याइनभ्याइ भएको उनको भनाई छ।
होटलमा अरिङ्गाल खाने कसरी आइपुगे त ग्राहक? उत्तरमा उनले भनिन् “यो सब फेसबुकको कमाल हो। मैले फेसबुकमार्फत नै यसको प्रचार गरे। त्यहीबाट यसको व्यापार बढ्न थाल्यो।”
सिर्जना थप्छिन् , शुरुमा मैले ‘अरिङ्गाल राखेर खाने हो?’ भन्ने स्टाटस राखे, त्यसपछि ‘अरिङ्गालको नयाँ व्यावसाय’ भन्दै पोष्ट गरेँ त्यसलगत्तै ‘फष्टाउँदै छ अरिङ्गाल व्यवसाय’ भन्दै अरिङ्गालको फोटो राखेकीले यसैबाट व्यवसायले गति लिन थाल्यो।
“अहिले त काठमाडौँ र पोखराबाट समेत अरिङ्गालको माग बढिरहेको छ तर मागअनुसार पुर्‍याउने सकेकी छैन।”उनले भनिन्। सिर्जनाले दैनिक १० देखि १५ हजारसम्मको अरिङ्गालको व्यापार गर्ने गरेको दाबी गर्छिन्।
“विशेष गरी अरिङ्गाल खान आउने सौखिन, चिसो लागेका र रक्तचाप कम भयो भन्नेहरु छन्।” भन्छिन्, “अरिङ्गाल भन्ने बित्तिकै धेरै डराउँथे तर यही नै व्यवसायका रुपमा आजकाल फष्टाउँदो छ। यसलाई व्यावसायिक रूपमा पाल्न सके अझै राम्रो हुँदै जाने देखिन्छ।”
अरिङ्गाल पोलेर आर्थिक जोहो गर्न सफल भएका म्याग्दी विम–७ भारबाङ मालिका गाउँपालिका २६ वर्षीय रिमबहादुर गौतम बताउँछन्। “एक दिन गाउँमा एक गुरुङ थरका व्यक्ति अरिङ्गाल खोज्दै आए, हामीले अरिङ्गाल पोलेर दिएपछि उनले खाँदै यसबाटै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आएको बताए।
आफ्नो शरीरमा अरिङ्गाल खाएपछि मात्रै पसिना आउने थालेको उनले जानकारी दिए। त्यसपछि विभिन्न रोग भएकाले पनि अरिङ्गालको खाजी गर्दै आउन थालेकाले यसको माग बढ्न थाल्यो।”
गौतमले आफूहरु दुईभाइ मिलेर अरिङ्गाल व्यापार गर्न थालेको बताउँछन्। “अहिले त एकदमै माग बढ्दो छ तर अरिङ्गाल पाउनै गाह्रो छ” अरिङ्गाल खोज्न एक दिनको बाटोसम्म हिँड्नु परेको उनको अनुभव छ। ठूलो घारबाट ३३ माना जति अरिङ्गाल निकालेको र रु ४० हजार जति कमाएको रिमबहादुरको भनाइ छ।
गौतम भन्छन्, “अरिङ्गाले टोक्ने भएकाले अलि गाह्रो हुन्छ होला यसलाई व्यावसायिक रूप दिन। पछिल्लो समय यसको माग बढ्दै गएको छ अब कृषि विज्ञले कुनै सल्लाह दिए भने गर्ने सकिन्छ कि!” रासस
फोटो साभार www. pahilopost.com ।
ढोरपाटनबाट उडेको हेलिकप्टर बलेवामा आकस्मिक अवतरण
हावाहुरीले लियो रौतहटमा एक महिलाको ज्यान
अवैध शिशु जन्माएर युवतीले किन गरिन आत्महत्या
मृत भेटिएका शिशिरले साथीलाई पठाएको म्यासेज ‘मलाई खोज्न यहाँ आउनु’
तातोपानी कुण्डमा देउवा-पौडेलको डुबुल्की